Rọpụtara (GW501516) Cardarine ntụ ntụ (317318-70-0) Nsukka & ụlọ ọrụ
Cardarine (GW501516) ntụ ntụ
/ ngwaahịa / SARMS / Cardarine (GW501516) ntụ ntụ
SKU: 317318-70-0. Category: SARMS
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram na usoro ntụpọ nke Cardarine (GW501516) (317318-70-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Cardarine (GW501516) ntụ ntụ isi Characters
aha: Cardarine (GW501516) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C21H18F3NO3S2
Ọbara arọ: 453.498
Nchekwa Nche: RT
agba: Ìhè odo kristụ ntụ ntụ
Cardarine (GW501516) uzuzu ojiji na steroid steroid
A na-akpọkwa ájá cardinine (GW501516) dị ka GW-501,516, GW1516, GSK-516 na n'elu ahịa ojii dị ka Endurobol.
GW501516 ntụ ntụ Usage
10-20mg kwa ụbọchị bụ ọgwụ zuru ezu. A na-atụ aro ka ịmalite na 10mg kwa ụbọchị iji jiri nlezianya mee ka onye nlekọta ahụ ghọtara chemical ọhụrụ ahụ.
Ịdọ aka ná ntị na GW501516 ntụ ntụ
A nwalewo GW501516 maka nchọpụta 2year ma chọpụtaghi mmụba ọ bụla ma ọ bụ nkwụsịtụ na mmetụta. Imirikiti mmadụ na-agba ọsọ maka oge 12-14 n'otu oge na nkwụsị 4-6week. Nke a kwesiri ka o kwekọọ na usoro SARM, ma enweghi ihe obula negosi na GW501516 / Cardarine kwesiri igbusi-cycled mgbe obere oge.
Ịghara ikwu na enweghi mmetụta ọ bụla nke GW501516 / Cardarine, mana na 20years ikpeazụ a enweghi mmetụta ọ bụla na onye ọ bụla na-amụ ọgwụ.
GW501516 Powder Powder (CAS 317318-70-0)
Cardarine ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Kaadị Cardinine (CAS 317318-70-0); zụta GW501516 ntụ ntụ site na AASraw
Aha: GW501516 / Cardarine
Molekụla arọ: 453.498
Ntọala Melt: 134-136 ℃
Nchekwa Temp .: RT
Agba: Ìhè odo kristal ntụ ntụ
AASraw na-enye 98% GW501516 / Cardarine ọcha ntụ ntụ n'okpuru labs ma ọ bụ bodybuilders maka oral ma ọ bụ ogwu ojiji.
Cardarine (GW501516) ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
GW 501516 / Cardarine Basic information
Kedu ihe bụ Super Cardarine? / 8 Benefits Of Cardarine
9 ihe ị chọrọ ịma banyere Cardarine ntụ ntụ !!!